बिवाह पछि किन माेटाउँछन युवतिहरु? बाहिरियाे ६ कारण – Eps Sathi
January 8, 2022 512
बिवाह अघि दुब्ला पातला रहेका अघिकांश युव’तिहरु विवाह पछि माेटाउँछन। आखिर किन त ? याे विषयमा हामिलाई थाहा हुदैन तर खुल्दुली लाग्ने गर्छ। यहि खुलदुली हटाउनका लागी याे विषयमा थुप्रै अ’नुसन्धान भएकाे छ।
विवाहकाे ५ वर्ष भित्र करिब ८२ प्रतिशत जाेडिकाे ताैल ५ देखि १० किलाे सम्म बढ्ने फेमली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुशन्धान अनुसार विवाह पछि थुप्रै म’हिला र पुरुषकाे ताैल निकै तेज रुपमा बढ्ने गरेकाे पाईन्छ। यस्तै अन्य अनुसन्धान अनुसार विवाहकाे ५ वर्ष भित्र करिब ८२ प्रतिशत जाेडिकाे ताैल ५ देखि १० किलाे सम्म बढ्ने गर्दछ।
‍‍हर्माेनल चेन्ज : अध्ययन अनुसार, विवाह पछि शरिरमा ह’र्माेनल परिवर्तन हुने गर्दछ। यसले गर्दा यु’वतिहरुकाे ताैल बढ्न थाल्छ। निन्द्रा नपुग्नु : विवाहअधि भन्दा पछि युवतिहरुकाे दैनिक समय तालिका फरक हुनेहुदा उनिहरु व्यस्त हुन थाल्छन। जसकाे कारण उनिहरुलाई निन्द्राकाे कमि हुन्छ।जस्ले गर्दा पनि ताैल बढ्ने गर्छ। तनाब : विवाहपछि सुरुका दिनहरुमा नयाँ घर परिवार सँग रुजन समय लाग्छ र उनिहरु त’नावमा हन्छन। जस्ले गर्दा पनि ताैल बढ्ने गर्छ।
साेचमा परिवर्तन : मानिसहरु विवाह पहिले राम्राे देखिन आफनाे डाय्ट र फिटनेसमा ध्यान दिने गर्छन। जुन विवाह पछि यस्ता कुराहरु छुट्ने गर्दछ र यस्ले पनि ताैल बढाउछ। उमेरकाे असर : आजकल धेरै जसाे मानिस २८ देखि ३० वर्षमा सेटल भएपछि मात्र विहे गर्ने गर्छन। जबकी अध्ययन अनुसार ३० वर्षपछि हाम्राे शरिरकाे मेटाबाेलिजमकाे रेट कम हुन्छ।जस्ले गर्दा पनि हाम्राे ताैल बढ्ने गर्दछ।
दैनिकिमा परिवर्तन : एक्लै हुदा आफुलाई फिट राखनका लागी पर्याप्त समय हुने गर्छ जुन विवाह पछि पारिवारिक कारण समय अनुकुल हुन जान्छ। मानिसहरु व्यामकाे लागि पर्याप्त समय निकालन सक्दैन्न। शारिरक र मा’नसिक रुपमा निष्कर्य हुने भएकाे कारण ताैल बढ्ने गर्छ।
Prevकोरियामा मालिकले आफ्नै कामदारलाई मलद्वारमा रड छिराएर गरे ह’त्या
Nextयति कम उमेरबाटै राजनितिमा लाग्न पाइने कानून ल्याउँदै कोरिया, स्कुल पढ्नेले समेत राजनिति गर्न सक्ने
नेपालले १ बर्षमा ६५ करोडको डाइपर आयात गरेको छ